Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Hard Drive
PS3 drive adag yahay sida drives adag dibadda. Waa arrin aad u fudud inuu ka soo kabsado xogta lumay ka PS3 drive adag. Read More >>
Waxaad soo kaban karto, xogta laga drive adag qaybaha xun by reading hagahan oo isticmaalaya Wondershare Data Recovery barnaamijka effortlessly. Read More >>
Hard drives yihiin qalabka jilicsan. Inkasta oo ay u muuqan qalabka hardware sida adag, wax yar taxadar ah waxay keeni kartaa disk adag in cillad ama ka xun, joojin oo shaqeeya wadajir. Read More >>
Waxaa jira tobanaan kun oo ka mid ah Calaamooyinkiisa in arbushin ilaa sida ugu dhakhsaha badan drive ka adag yahay mid soo dhamaystiraya. A user arrintan la xiriira u baahan yahay si loo hubiyo in drive adag oo aan dhaqso lagu badalay oo kaliya laakiin fi muhiimka Read More >>
In Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada teknoolajiyada cusub iyo sare ayaa la horumariyey si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ku haayo zone raaxada si ay u dareemaan dejiyo ee casriga ah ee Pro Read More >>
Marka aad password xiran drive adag, aad si dhib soo kaban karto xogta. Laakiin aad qaban karto soo kabashada adag password drive iyo soo kabashada xogta la hagahan Read More >>
Maqaalkani waxa aad barayaa 5 sare drive adag software kabashada xogta. Waxaad u isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado badiyay noocyo badan oo xogta laga eryi adag oo kala duwan. Read More >>
Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa oo dhan qalabka kabashada drive adag in aad u baahan tahay in la ogaado Read More >>
Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka wadid aad u adag, waxaad u baahan tahay in la helo iyo adeegyada maxaliga ah drive adag soo kabashada iyo u sheeg shaqaalaha halkan si ay kuu caawiyaan. Read More >>
Haddii aad qabto xijaab soo kabashada, waxaad si fudud dib kartaa howlgalka. Waxa la sameeyo haddii aad qoruhu aad badiyay drive adag? Software kabashada Barzakh soo baxay ayaa kaa caawin doona. Read More >>
Formatted drive adag si qalad ah, oo dib ma ilaa xogta muhiim? Warka wanaagsani waa in aad weli fursad ay ku unformat drive adag. Read More >>
Drive A adag yahay dukaanka computer ee xogta sida waxa uu leeyahay oo dhan xogta looga baahan yahay hawlaha caadiga ah ee aad computer iyo sidoo kale macluumaadka aad laga yaabaa in ay intaa ku kaydsan ku yaal sida music, phot Read More >>
Drive Hard waa qaybta ugu hallayn karo ee Nidaamka koombiyuutar kasta. Haddii aan la kor u fulineynin in sumaddii markaas waxaa aad u adag in ay sii nidaamka si. Qaybta ugu weyn ee Nidaamka koombiyuutar kasta sida th Read More >>
Raadinta inay iska iibiso aad PC ama Mac Windows qof kale? Waxaa Haddii ahaan baahida loo qabo in la iibsado qalab cusub ama kaliya lacag, aad u wanaagsan dhammaan xogta hore iyo hadda jira laga saaro habka samayn doonaa. Read More >>
Saxannada adag yihiin waxa ugu muhiimsan on your computer, sababtoo ah mid ka mid qalad oo aad waayi kartaa dhamaystiran xogta. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad ogtahay in cajaladaha adag yihiin qalab farsamo, in gabi doono ka dib markii Lon Read More >>
Macna ma laha inta weyn aad Sata HDD yahay, accidences khasaaraha xogta dhici kartaa sababo ka mid ah. Maqaalkani waxa uu ku tusaysaa sida inuu ka soo kabsado xogta ka Sata drive adag. Read More >>
Drives adag External waa muhiim haddii aad isticmaasho your computer wax walba, taas oo qof kasta maalmahan falaa. Waxay yihiin habka ugu fiican si loo hubiyo in dhammaan xogta aad si fiican u kaydiyaa oo aan aad waayi doonto Read More >>